Izinhlekelele zemvelo zikhiqiza abampofu abayizigidi ezingama-26 ngonyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IHaiti ngemuva kweSiphepho uMatthew.
Izinhlekelele zemvelo, njengeziphepho, ukuzamazama komhlaba nesomiso, kuveza inani elimangazayo le- 26 million abampofu minyaka yonke. Lokhu kuvezwe yiBhange Lomhlaba ngesikhathi kunengqungquthela yezulu (COP22).
Kukonke, unyaka ngamunye kunokulahleka kwe- ngaphezu kwesigamu sezigidigidi zamaRandi ngenxa yalezi zimo uma umthelela enhlalakahleni yabantu abangenazo izinsiza ezanele zezezimali zokulahlekelwa yikho konke noma cishe konke kufakiwe. Leso sibalo sikhuphuka ngama-60% izilinganiso zomthelela wezinhlekelele ezenziwe kuze kube manje yi-UN, obeku-oda lika-300.000 million dollars.
Lapho kubalwa umthelela weziphepho, ukuzamazama komhlaba noma isomiso, abampofu kakhulu yilabo abahlupheka kakhulu: balahlekelwa yi-11% yezinto zabo ezibonakalayo, kepha i-47% yenhlalakahle yabo. Isibonelo ngesiphepho uMatthew, esahlasela iHaiti ne-United States. Ezweni laseNyakatho Melika, ukulahleka kwempahla kwabalelwa ezigidini ezingama-7.000, kanti kwabampofu kakhulu kwakuyizigidi ezingama-2.000 XNUMX.
Uma kubalwa ukulahleka kwempahla kuphela, amazwe acebe kakhulu azohlala enqoba, njengoba iBhange Lomhlaba laxwayisa. Uma umthelela enhlalakahleni yabantu abanezinsizakusebenza ezimbalwa ubhekwa, Izinhlelo zosizo noma uxhaso lungalungiswa ukusiza labo abadinga kakhulu futhi ngaleyo ndlela kuvimbele abantu abaningi ekufeni ngenxa yezinhlekelele zemvelo.
Isomiso, izivunguvungu, ukuzamazama komhlaba, izikhukhula nezinye izinto zizoqhubeka zenzeke unomphela, futhi kungaba yingozi kakhulu ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu. Ngakho-ke, kufanele sivumelane nezimo ngangokunokwenzeka futhi sisize labo abangenayo imithombo edingekayo yokuzivikela.
Isimo siba nzima kakhulu namuhla, njengoba umengameli omusha waseMelika, uDonald Trump, engabaza ukushintsha kwesimo sezulu futhi uzimisele ukususa izwe lakhe esivumelwaneni saseParis. Uma kunjalo, ngokusho kwe- Ucwaningo lweLux, izinqubomgomo zayo zamandla kungaholela ekwandeni kokukhishwa kwe-CO2 kusuka 3.400 billion amathani eminyakeni eyisishiyagalombili ezayo, kuqhathaniswa nokuzibophezela kuka-Obama ukunciphisa ukukhishwa ngamaphesenti angama-30.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izinhlekelele zemvelo zikhiqiza abantu abampofu abayizigidi ezingama-26 ngonyaka